How to rank on Amazon for keywords keywords?
Kana iwe uchida kuziva maitiro ekugadzirisa maAmerica nokuda kwemashoko ako akakodzera akakodzera - iwe watova munzvimbo yakarurama. Waiziva here kuti peji yekutanga yemigumisiro yekutsvaga kuAmerica inowana kudarika 60% yehuwandu hwekutsvaga motokari inobva kune vatengi vanogara vachitsvaka zvinhu zvakatengeswa pamusoro apo? Saka, zvinoreva kuti iwe unoswedera pedyo nepamusoro weAmerica tsvakurudzo yekutsvaga mazwi ako akakodzera uye mazwi ekutsvaga kwenguva yakareba - izvo zvingawedzerwa kutengesa iwe unogona kubatsirwa kubva. Asi maitiro api kuAmazon nokuda kwemashoko makuru akakodzera, kunyanya kana iwe uchiri mutengesi wevashandi vekutsvaga achangotora matanho ekutanga ari mumisika yepamusoro? Mhinduro shoma ndeye - kunzwisisa mazwi makuru uye zvinyorwa zvavo zvikuru zvakaratidzwa kubva mumaonero eA9 search ranking algorithm. Saka, pasi apa ndichaenda kukuratidza kuti ungaratidza sei kuAmazon - nokupa mutsara mupfupi pamusoro pezvinonyanya kukosha mazwi uye nenzira yakarurama yekuvaziva pamusoro apo.
Nzira yekuongororwa paAmazon for Top Relevant Keywords
. Yeuka, inoita nheyo yepamusoro yehutano hwako hwehutungamiri paAmazon. Heano mamwe mazwi ekutanga uye tsanangudzo kwauri kuti unzwisise kuti ungaronga sei kuAmazon nokuda kwekutsvaga chinangwa chemashoko. Iva nechokwadi chokuti unazvo zvose:
Mashoko - Amazon keywords, kubva pane maonero eSeO uye mazuva ano ecommerce trade, ingadai ichange iine "mafupfupi" muchidimbu iyo huru yezvinhu zvakatengeswa kana hukama hwayo hukuru kune zvakagadzirwa. The keywords key are a part of your product listing optimization in Amazon product search.
Long-Tail Mashoko akadai - mirai mutsara mumwechete kana kuti keyword kusanganiswa kuti vatengi vanogara vanogona kutora mhinduro yekutsvakurudza mhando kuAmazon. Zvichinyatsojeka, Amazon yakareba-muswe keywords ndeyekukosha keyword kusanganiswa kunoshandiswa pakutsvakurudza kutsvaga kazhinji. Muzvinyorwa, kunyanya rudzi urwu rwemashoko rinoita chimwe chinhu chinenge makumi manomwe kubva muzana chekutsvakurudza kwezvinhu zvakagadzirwa nevatengi vanogara kune uko.
Ndiyo chikonzero nei zvakakosha kunyanya kuziva zvakakosha zvitsva zvinotsvaga zvakakosha kune chinhu chako pakutengesa kana mutengo wechikwata. Nenzira iyo, iwe uchava nemikana yakanakisisa yekuratidzwa kune vanhu vazhinji vanogona kutenga vatengi vachitsvaga zvigadzirwa zvinowanikwa pakutengeswa pamusoro apo. Pakati pevamwe, ndinokurudzira kushandisa mazwi anotevera ekutsvakurudza mashandisi, zvakanyatsogadzirirwa iyo ecommerce platform.
Merchant Words - chinhu chakanaka chekushandisa kushanda nokukurumidza kutsvakurudza kwemashoko eAmazon, kuwana rubatsiro nemazano akawanda anokosha kwenguva refu, ayo anotorwa zvakananga kubva kumusoro vatengesi vari munharaunda yenyu kana chigadzirwa.
Jungle Scout - i-stop-shop-yega yega rese entrepreneur kutengesa kuAmazon. Kunze kwaro inonyanya kukosha mashoko ezvinyorwa zvese, Jungle Scout yakaratidza kuti inobatsira chaizvo kana ichiuya pakutsvaga mimwe michina mitsva yemitengo, kana kuti kudiwa kwekutora chikamu chekukwikwidza kwekukosha kwepamusoro - zvose pamusoro pemiti inobatsira inobatsira, uye iyo yakareba refu-muswe waro michina yakafanira kuenzanisa Source .